Mendrika ve ny pedal Speedplay? - Afaka Mitsofoka
Tena > Afaka Mitsofoka > Pedaloma chromoly aotra maimaim-poana - fanontaniana mahazatra
Mendrika ve ny pedal Speedplay?
Pedaleta haingam-pandehatena tsara mitaingina. Noraisiny kely ny fahazarana (toy ny mitsinkafona amin'ny ranomandry dia fahatsapana mahazatra), fa ankehitriny tsy te handeha amin'ny rafitra hafa aho. Maivana izy ireo, kely ary mora ampiasaina. Ny tena fihenan'nyPedaleta haingam-pandehadia izy ireo fa safidy lafo vidy.
Salama, eto izahay androany hiresaka momba ny pedal Speedpay ary ny antony hampiasanao azy ireo. Speedplay dia manana laza ho sarotra apetraka ho an'ny olona mila ara-pahasalamana, saingy niova izany tao anatin'ny 10 taona lasa raha manontany ahy ianao tamin'ny fotoana nidirako voalohany tamin'ny lalao bisikileta 12 dia nisy 13 taona lasa izay momba an'io laza io fa izy ireo dia pedal tsara toy izany ho an'ny olona manana biomekanika kely hafa rehefa marary ny lohalika amin'ny bisikileta ianao ary ny antony dia noforonin'olona iray izay nanaintaina ny lohalika, Richard Burnout any California nanapa-kevitra fa simba ny pedal ny asany rafitra nitaingenany ary nanapa-kevitra ny hanao pedal azy manokana, tantara kely mahafinaritra iray, saingy manana safidy fanitsiana be dia be amin'ny toerana mety rehetra izy ireo ary inona no tiako hazavaina aminao hoe maninona ianao no mampiasa azy io ok hataonay zavatra toy izany aloha, jereo hatrany i Katie izay maodely teto ho ahy androany ary ho toa azy ao amin'ny Philbertp avy amin'ny bisikileta aloha isika ary inona ny zavatra momba azy mety hanondro fa tokony handeha amin'ny lalao hafainganam-pandeha ianao izao ary mety hanalavitra mihitsy aza, fa koa izany Ngs izay tsapanao amin'ny tenanao fa tsy ananany ary avy eo hodinihinay amin'ny antsipiriany kokoa ny fomba hananganana azy ireo demystify fa hampihena kokoa ny fanaintainany, ho mora azo kokoa ary hanome anao fahatokisana kely ary angamba bebe kokoa marina noho ny tsy mety ary avy eo isika no farany hametraka azy ireo amin'ny bisikileta ary hijery hoe ahoana izany amin'ny fihodinana dia fanamarinana fotsiny raha mbola mivoaka ny tongotro, ka raha manana fihodinana ivelany ianao, fomba iray fotsiny hitsarana azy . Mandeha izay lalana mavitrika eny, eto, avelao aho hanao azy amin'ny fomba tsy mihetsika, ary hitanao fa mitovy amin'ny tongotrao havanana manao lesona izy ireo ary raha mijery ny rantsan-tongonao dia somary miala amin'ny rantsan-tongotra ny rantsan-tongotra. fomba ankavanana ary sitrana tsara ny olona samy hafa fa tsy maninona ianao ary tonga tampoka izany ary hiseho fotsiny ilay nanoratra hoe misy olona ho tia an'izany ary hahafantatra ny tenany izy ireo ary miditra amin'ny fihodinana ivelany fotsiny rehefa mijanona isika ary lazao fa raha avelanao handeha mahitsy mandritra ny iray minitra ny tongotrao sasany, izay tena mpihazakazaka gana dia mihodina be ny any ivelany ary manao izany izy ireo ary miditra ao matetika dia miditra ny olona ary marary amin'ny lohalika izy ireo satria manao an'io Can 'io. t mahazaka ny fametrahana ny bisikileta mba hanitsiana ny pedal ny pedal system ary avy eo avadiny ny ligament iliotibial, fa mijery anao fotsiny izahay amin'ny fampisehoana mavitrika kokoa momba ity fandaka eo am-pandriana ity izao, rehefa mihidy anao aho mihoapampana izany fa izay ataontsika aminao dia hahasitrana ny rantsantongony ary avy eo dia heverinay fa tsy mety izany, izao ve dia izao ianao no tongotrao tsara, saingy rehefa mitondra anao any aho dia mahatsapa voajanahary fotsiny, ary marina izany, koa mandidia olona iray izay tena te handinika anao rehefa mahazo rafitra Clinch matanjaka ianao, izany no tsapany ary mahatsapa ho toy ny mihisatra eto io wrench io mba hahatonga azy hihodina mila fehin-by ianao ny anton'izany dia hoe ny hery rehetra izay midina amin'ny lohalika dia vita miaraka aminy ary ny ligament iliotibial dia mihamafy hatrany ary avy eo manosika lohalika. manerana ary ny sain'ny olona misafotofoto dia ny fanaintainan'ny lohalika sy ny fijanonany eto ary manana fitsaboana ara-batana be dia be aho eto raha ny olana no zava-misy ary matetika rehefa biomekanika izy io dia mila vahaolana amin'ny fitaovana ahazoako pedal mety hanampy. ianao satria afaka mamolavola mandrakizay mandritra ny iray andro, fa raha ny antony dia tsy maintsy mandeha mahitsy ianao rehefa mila pedal rehefa manasitrana ny rantsan-tongotrao dia hamatotra hatrany, noho izany ny sakana ho an'ny olona dia mety mampiasa pedal Speedpay satria be dia be izy ireo. Safidy fanamboarana bebe kokoa ao amin'izy ireo izy ireo mety mandany fotoana bebe kokoa hananganana azy ireo fa mieritreritra momba azy raha marina izany, tahirizo ny lohanao eo imason'ny olona marobe izay nolazaiko imbetsaka tamiko ny tenako talohan'ny nidiran'ny walk-in CLE tamin'ny tsena fa ny pedal hafainganam-pandeha dia ho tonta vetivety ary tsy ho simba haingana ny rafitry ny pedal ary manontany ny tanora aho raha tianao ho rovitra ilay pedal na mila ho reraka ianao satria mandeha any ho any ireo hery ireo. haingam-pandeha? Milala pedaly raha manontany ahy ianao indrindra milalao amin'ny olona manana biomekanika sasany fa tsy tiako ireo rafitra pedal hafa raha toa ka mahazo tsara amin'ny Shimano SPD Basically ianao, ny Speed ​​Fair dia manome ny fotoana azo tsidihina tsy misy fanaintainana intsony satria mamela antsika ny biomekanika tokana. hanao izany.
Tadidio foana fa mahay mandanjalanja ianao, azo ovaina ity, azo ovaina tokoa
Inona ireo pedal Speedplay maivana indrindra?
Lalao hafainganam-pandehaNanograms nopedaly maivana indrindraFantatro izany, ary ny tena hafahafa indrindra izay efa nankafiziko. Mety hiova ve izany? Mampahafantatra ny tena-ho-ho-anarana, titanium-axle, 3D vita pirinty vita pirinty 3Dafaka mitsofokamiaraka amin'ny savony titanium avy amin'ny marika alemana, Titanum
Mandra-pahoviana ny hafanana Speedplay?
3.000 ka hatramin'ny 5,000 kilaometatra
Pedal inona no ampiasain'ny pro?
Ny ankamaroan'ny mpitaingina ao amin'nyHO AN'NYandianyAmpiasaona Shimano na Lookafaka mitsofokasatria ireo marika roa ireo dia manohana ny ankamaroan'ny ekipa WorldTour. Fanampin'izay, ekipa sasany dia maniry ny hanana ny mpitaingina azy rehetra hitovyafaka mitsofokaka ny tokantrano iray dia afaka manome ny mpitarika ekipa ny bisikiletany raha sendra olana ara-mekanika.roapolo. 2017.
Tsara kokoa ho an'ny lohalika ve ny pedal Speedplay?
Matetika loatra ny olona no mieritreritra nyMilalao hafainganam-pandehadia hotsara kokoaho an'nylohalika, saingy ny zavatra niainako dia manondro fa tsy izany foana no izy. Mampiasa ny maodely 9, cleat mena aho, izay mitsinkafona betsaka, fa ny manana karazana float eo afovoany dia mahatonga nylohalikamahatsiaro milamina kokoa.
Tsara kokoa noho ny Shimano ve ny pedal Look?
Ireo takelaka ireo dia atsofoka ao anaty vatana ary tsy vitan'ny hoe mampihena ny akanjo scuff sy pedal fotsiny fa manatsara ny fampisehoana clip-in koa. NyShimanoSPD-SL foto-kevitra dia mitovy amin'nyJereoKeo pedal, ny fahasamihafana miavaka indrindra amin'ny endrika refy somary lehibe kokoa sy ny velaran'ny sehatra ambonimbony kokoa.27 2021.
Impiry ianao no tokony hisolo ny pedal Speedplay?
Lalao hafainganam-pandeha.Lalao hafainganam-pandehahoy,Soloycleats farafahakeliny isaky ny 3.000-5.000 kilaometatra na ho haingana raha toa ka mampiseho akanjo efa mandroso ireo faritra mikatona. Mihatra izanynycleats ho an'ny Zero, Light Action ary Xafaka mitsofoka.
Reraka ve ny pedal Shimano?
Eny ny valiny, SPDpedal efa tonta. Ny fanontaniana manaraka dia ny Ahoana no ahafahanao milaza ilaypedaldiatonta? Ary amin'ny fanitarana rehefaAzamila soloinao ny cleats kiraro SPD. Bisikileta an-tendrombohitra SPDafaka mitsofokatena mikitoantoana.
Mampidi-doza ve ny pedal tsy misy clip?
Ny iray amin'ireo lainga lehibe indrindra voalaza eo amin'ny sehatry ny bisikileta dia izanypedal tsy misy cliptsy mihoatraNAMPIDI-DOZAnoho ny trano fisakafoanana ary tsy mampitombo ny loza mety hanjo anao izany. Nolazaina ny mpitaingina vaovao fa tsy mitovy amin'ny fisaka fotsiny izy ireo ary samy tsy azo antoka.
Inona avy ireo pedal tsy misy clip mora indrindra hialana?
HO AN'NYtsy misy clipbeginners, SPDafaka mitsofokano lalana mankany. indrindraafaka mitsofokadia misy lafiny roa, izay mahatonga ny fianarana manao clip amin'ny beMoramora. Ny tombony hafa amin'ny rafitra SPD dia ny fisian'ny cleats maro-famotsorana an'i Shimano.
Iza amin'ny Speedplay zero na chromoly pedal tsara kokoa?
Ny pedal Speedplay Zero dia atolotra amin'ny isa hafa. Manoro anao aho mba hahazo ireo chromoly fa tsy ireo vy tsy misy fangarony ireo: manodidina ny 5g isaky ny pedal no mavesatra ary £ 40 no mora kokoa. Ireto tsy misy volo ireto dia mety ho tsara kokoa raha toa ka maninona ianao.
Iza no Speedplay aotra hafainganam-pandeha na tsy matevina Speedplay?
Fampitahana vokatra: SpeedPlay Zero Chromoly vs SpeedPlay Zero Stainless. Ity no kinova Zero Chromoly izay misy vy vy tsy misy fangarony, kalitao sy hazavana avo lenta. Raha ny marina, ny lanjan'ny pedal tsirairay dia 108 gr fotsiny. Ny Zero dia iray amin'ireo pedal amin'ny lalana mandroso indrindra eto an-tany.
Iza no pedal chromoly tsara indrindra eto an-tany?
Ity no kinova Zero Chromoly izay misy vy vy tsy misy fangarony, kalitao sy hazavana avo lenta. Raha ny marina, ny lanjan'ny pedal tsirairay dia 108 gr fotsiny. Ny Zero dia iray amin'ireo pedal amin'ny lalana mandroso indrindra eto an-tany.